Once UponaTime … in Hollywood 2019 – Myanmar Subtitles
Genre: Comedy, Drama Director: Quentin Tarantino Actors: Brad Pitt, Emile Hirsch, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie Country: China, UK, USA Released: 26 Jul 2019 Score: 7.9 Duration: 161 min Quality: UHD BluRay 1080P Years: 2019 View: 1,103
Tarantino ဟာ ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ Genius တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Violence တွေကို အနုပညာတစ်ခုဖြစ်အောင် ဖန်တီးရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ 😯ဒါကြောင့်ပဲသူ့ရုပ်ရှင်တွေဟာ တခြားရုပ်ရှင်တွေနဲ့ကွဲထွက်ပြီး နာမည်ကြီးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 😉😇 ဒီ Once Uponatime in Hollywood မှာလည်း ဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်မသွားမယ့် သူ့ရဲ့အနုပညာကို မြင်တွေ့ခံစားရမှာ အသေအချာပါပဲ။✌🏻✌🏻 Leonardo (Rick Dalton) နဲ့ Brad Pitt (Cliff Booth) တို့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုကလည်း ပြောစရာမလိုအောင် Perfect ပါပဲ။😉 Once UponaTime in Hollywood ဆိုသလိုပဲ ဇာတ်လမ်းက ၁၉၆၉ ခုနှစ်က Hollywood ရုပ်ရှင်လောကကို အခြေခံထားပါတယ်။😇 Rick နဲ့ သူရဲ့ Double Stunt ဖြစ်တဲ့ Cliff တို့ ရုပ်ရှင်လောကမှာ ပြန်အခြေချတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ဘာတွေဘယ်လိုတွေ ကြုံတွေ့ရလဲဆိုတာတော့ .
Tarantino ဟာ ကမ်ဘာ့ရုပျရှငျလောကမှာ Genius တဈယောကျဖြဈပွီး Violence တွကေို အနုပညာတစ်ခုဖြဈအောငျ ဖန်တီးရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ တဈဦးတညျးသော ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယျ။ 😯ဒါကွောင့်ပဲသူ့ရုပျရှငျတွဟော တခြားရုပျရှငျတွနေဲ့ကွဲထွကျပွီး နာမညျကွီးနတောပဲ ဖြစ်ပါတယျ။ 😉😇 ဒီ Once Uponatime in Hollywood မှာလညျး ဘယျတော့မှပျောက်ကွယ်မသွားမယျ့ သူ့ရဲ့အနုပညာကို မြငျတွခေံ့စားရမှာ အသေအချာပါပဲ။✌🏻✌🏻 Leonardo (Rick Dalton) နဲ့ Brad Pitt (Cliff Booth) တို့ရဲ့ သရုပျဆောင်မှုကလညျး ပြောစရာမလိုအောငျ Perfect ပါပဲ။😉 Once UponaTime in Hollywood ဆိုသလိုပဲ ဇာတ်လမျးက ၁၉၆၉ ခုနှစ်က Hollywood ရုပျရှငျလောကကို အခြေခံထားပါတယျ။😇 Rick နဲ့ သူရဲ့ Double Stunt ဖြစ်တဲ့ Cliff တို့ ရုပျရှငျလောကမှာ ပြနျေအခြချတော့ သူတို့နှဈယောကျ ဘာတွဘေယ်လိုတွေ ကွုံတွရေ့လဲဆိုတာတော့ .
26 July 2019 (USA
Untral HD BluRay 1080P (3.60Gb)
3.60Gb Download Short Myanmar 1080P
#Once UponaTime … in Hollywood 2019 #Download Once UponaTime … in Hollywood 2019 Full Movie #Free Once UponaTime … in Hollywood 2019 Download